महोत्तरीबासीको कामना पोखरेल फेरि मन्त्री भएको हेर्ने चाहाना ! पोखरेलको घरदैलो आज पनि – मुलधार न्युज
Home > Front News > महोत्तरीबासीको कामना पोखरेल फेरि मन्त्री भएको हेर्ने चाहाना ! पोखरेलको घरदैलो आज पनि
८ पुष २०७४, शनिबार २०:०७
महोत्तरी/ ८, पुस
महोत्तरी जिल्लाबासी ले महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर -१ बाट बिजयी गिरिराजमणि पोखरेल पुन मन्त्री भएको हेर्ने चाहाना भएको बताएका छन ।
एकै क्षेत्रबाट लगातार तीन पटकसम्म बिजयी भएका पोखरेल सामाजिक र विकासवादी नेता भएकोले एक पटक फेरि मन्त्री हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
चुनाव जिते लगत्तै मतदाताको घरदैलोमा पुगेर धन्यवाद र आभार ज्ञापन गरि रहनु भएका पोखरेललाई अधिकास मतदाताले अब बन्ने बामपंथीको सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका छन ।
बधाई र शुभकामना आदानप्रदान गर्ने क्रममा स्थानिय मतदाताले पोखरेललाई फेरि मन्त्री बन्न आशीर्वाद पनि दिएका छन । युवा, महिला वृद्ध सबैले पोखरेल मन्त्री भए महोत्तरीको मुहार फेरिने बताएका छन ।
महोत्तरी जिल्लाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुभएका पोखरेलले शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ मन्त्री हुँदा जिल्लाको स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरेको स्थानीयले बताएका छन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता र हाल बिना बिभागिय मन्त्री समेत रहनु भएका पोखरेलले लामो समयदेखि जिल्लाको विकासमा टेवा पुराउदै आउनुभएको छ ।
मन्त्री हुँदा होस वा नहुदा जिल्लाको सबै खाले विकासमा पोखरेल को महत्त्वपूर्ण भुमिका छ गौशाला नगरपालिकाका नेता बिष्णु लामाले भन्नुभयो : महोत्तरीको सबैखाले विकासमा पोखरेलको सक्रिय भुमिका छ ।
यो पटक बामपंथीहरुको स्थायी सरकार बन्ने पक्का भएकोले पोखरेलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
पोखरेल महोत्तरीको मात्रै नेता होइन राष्ट्रिय नेता हुन छोटो समय मन्त्री हुदा पनि पोखरेलले राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुभएको छ । बर्दिबासका राजन ढुंगानाले भन्नुभयो : सादा र सामुहिक जीवन ज्युउने सादगी नेता पोखरेल मन्त्री भए देशले एकजना ईमानदार र कर्तव्यनिष्ठ मन्त्री पाउने छ ।
महोत्तरी जिल्लाको ४ वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा क्षेत्र नम्बर -१ बाहेक सबै क्षेत्र मधेसवादी दलको गठबन्धनले जितेको छ । विकास प्रेमि को रुपमा परिचित पोखरेलले महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र-१ बाट अत्याधिक मतले बिजयि हुनुभएको हो ।
लामो समयदेखि महोत्तरी जिल्लाको समग्र विकासको लागि कृयाशिल पोखरेलले जनताको माझमा लोकप्रिय भएकै कारण पनि बिजय सम्भव भएको स्थानिय बताउछन् ।
यस अघि २०६४ र २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा पोखरेल यहि क्षेत्रबाट अत्याधिक मत ल्याएर बिजयी हुनु भएको थियो ।
२०६४ सालमा पोखरेल तत्कालीन जनमोर्चा तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएको थियो । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सानो मानिएको पार्टी जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट उम्मेदवारी दिनु भएको पोखरेल अत्याधिक मत ल्याएर बिजयी हुनु भएको थियो ।
२०६५ मा पार्टी एकता पछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी बाट सोही क्षेत्रको उम्मेदवार बन्नु भएका पोखरेल दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
सांसद र मन्त्री हुँदा जिल्लाको समग्र विकासमा कृयाशिल रहनुभएका पोखरेल शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ मन्त्री हुँदा जिल्लाका महत्त्वपूर्ण कामहरु गर्नु भएको थियो ।
मन्त्री पोखरेलको महोत्तरी जिल्ला बर्दिबास नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा मत अधिकार छ ।
पोखरेल बर्दिबास ३ कै गौरिडाडामा रहेको सामुहिक आवास “आधारशिला” मा बस्नुहुन्छ ।
एक पटक सफल शिक्षा मन्त्री र ३ पटक सम्म सफल स्वास्थ मन्त्री रुपमा परिचीत मन्त्री पोखरेलको महोत्तरीमा राम्रो प्रभाव रहेको छ ।
सामुहिक जीवनमा रहनु भएका पोखरेल उत्पिडित समुदाय र गरिब किसानका हक अधिकारका लागि लामो समयदेखि कृयाशिल हुनुहुन्छ । समग्र महाेत्तरी जिल्लाकाे बिकास र बिशेषगरी जिल्ला काे उत्तरी भेगकाे बिकास गर्ने बिकास पुरुषकाे रुपमा परिचित पोखरेललाई स्थानीय जनताले मधेसप्रेमी नेताको रुपमा चिन्छन ।
घरदैलो आज पनि जारी
महोत्तरी-१ बाट प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक मतले बिजयी गराएको भन्दै पोखरेलले आम मतदातालाइ घरैमा पुगेर धन्यवाद व्यक्त गरिरहनु भएको छ ।
पोखरेल ले आजपनी बर्दिबास नगरपालिकाको बिजलपुरा, बर्दिबास बजार लगायत विभिन्न वडाको मतदाताको घर घरमा घरदैलो घरदैलो गर्नुभएको छ ।
घरदैलोको क्रममा पोखरेललाई स्थानीय मतदाताले प्रत्येक घर घरबाट फुलमाला र अबिर लगाएर सम्मान व्यक्त गरेका छन ।
सयौं बालक, युवा, महिला र वृद्धहरुले पोखरेललाई भव्य स्वागत गरेका थिए ।
घरदैलोको क्रममा विभिन्न नाचगान सहितको भव्य र्याली निस्किएको थियो । घरदैलोको क्रममा महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा-१ को प्रदेश सभा-१ बाट बिजयी सारदादेवी थापा र प्रदेश सभा-२ बाट बिजयी भरतप्रसाद शाहलाई पनि मतदाताले भव्य स्वागत गरेका थिए ।
शिक्षक सङ्गठनको स्वागत
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन गौशला नगरकमिटी ले आज नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाइ स्वागत सम्मान गरेको छ ।
शिक्षक सङ्गठनले महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर -१ बाट बिजयी गिरिराजमणि पोखरेल, प्रदेश सभा-१ का सारदादेवी थापा र प्रदेश सभा-२ का भरतप्रसाद शाहलाई आज गौशला नगरपालिकामा स्वागत एवम् सम्मान गरेको हो ।
स्वागत सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा -१ बाट बिजयी पोखरेलले शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्न शिक्षकको नै महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको बताउनुभएको छ ।
शिक्षक जिम्मेवार भए मात्रै शिक्षाको विकास हुनसक्छ पुर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहुनुभएका पोखरेलले भन्नुभयो : शिक्षकले शिक्षकको भुमिका निर्वाह गरिदिनुस तब मात्रै शिक्षाको विकास हुन्छ ।
महोत्तरी जिल्ला शिक्षाको क्षेत्रमा कर्णाली भन्दा पनि पछाडी परेको बताउदै पोखरेलले परिवर्तन आफैबाट शुरु गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा-१ बाट बिजयी सारदादेवी थापा, प्रदेश सभा-२ बाट बिजयी भरतप्रसाद शाह, गौशला नगरपालिका का मेयर शिवनाथ महतो लगायतकाले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २६ निर्णय
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सशस्त्रद्धारा प्रभातफेरी र्याली (फोटोसहित)
प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा सम्बोधन नगर्ने
नापीका सर्वेक्षक जोशी घुससहित अख्तियारको फन्दामा
६ लाखमा चेली बेच्ने सन्तोष राई पक्राउ
अबको १० बर्ष भित्र रुकुम बेरोजगार मुक्त हुने-गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा
चितवनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप, डिएसपीसहित सात जना प्रहरी घाइते
‘नामसारी’ भिडियो सार्वजनिक
आर.आर.क्याम्पसमा ‘संस्कार, संस्कृति र सामाजिक रूपान्तरण’ विषयक परिचर्चा तथा शुभकामना विशेष कवि गोष्ठी
घुस लिने ट्राफिक प्रहरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
प्रधानमन्त्री ओलीकाे स्वास्थ्यमा सुधार, औषधीको डोज सकिएपछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी
सुनसरीका दुई शैक्षिक संस्थामा बम बिष्फोट